Akukho nanye iiMDO imbonakalo efakiweyo avele FSX and P3D
umbuzo Akukho nanye iiMDO imbonakalo efakiweyo avele FSX and P3D
I-2 iminyaka ye1 iveki edlulileyo - I-2 iminyaka ye1 iveki edlulileyo #450 by StargateMax
Yinto Akumangalisi ukuba akukho namnye umntu wathetha ngalo okwangoku.
Mna ke ndimmisile eziliqela intle add-ons ndakhuphela kule sayithi, ekukholelwa ukuba omnye okanye bobabini FSX kunye Prepar3D. Akukho nasinye sceneries zibonisa kulo mdlalo (s) konke. Lo moya add-ons zizakusebenza kakuhle, kodwa Andinamdla kangaka abo.
nam ulande le intle Hawaii, phantse 7 Gb, kunye eKauai kakhulu. Zonke ndibona yomdlalo engagqibekanga landscape ubusilika nje ngaphambili.
ingaba yintoni ingxaki?
Uhlobo lokugqibela: I-2 iminyaka ye1 iveki edlulileyo StargateMax.
I-2 iminyaka ye1 iveki edlulileyo #451 by Dariussssss
Okokuqala, ndicinga ukuba nisekhaya sawubona.
Okwesibini, musa ukwenza ndikutyele.
Okwesithathu, ulwazi olubanzi.
I-2 iminyaka ye1 iveki edlulileyo #452 by StargateMax
1) Molo (sizisola)
2) Apha ke kufuneka ukuba athi: Funda 4 ngezantsi.
4) Kulungile, mna bungasekho, akukho amaxhala kunye nam, kubonakala ngathi thina sobabini uqwalasela ngamnye ezinye krwada.
I-2 iminyaka ye1 iveki edlulileyo #453 by Gh0stRider203
Ndicinga ukuba ndiyazi lowo Hawai'i uthethe ngawo. Nakuba unokufakela kusenokufuneka ukongeza kwi umdlalo, ngesandla. Andiqinisekanga kakhulu KUTHENI oku kukuthi, kodwa maxa wambi yiloo kunjalo.
Ukuba akuqinisekanga ngendlela yokwenza loo lemme bazi yaye ndiya kukunceda ya naye
I-2 iminyaka ye1 iveki edlulileyo - I-2 iminyaka ye1 iveki edlulileyo #454 by Dariussssss
Masenze ngolu hlobo ...
Okokuqala, kufuneka uxelele ezinye izinto ngam ...
Ngaba wena uyifake kakuhle?
Ngaba wenza ubuhle kwi FSX wakho?
Zeziphi Imiqulu intle na uzama ukufaka?
Kwakufuneka ndenze ndithanda elayishelwe ezantsi esuka apha, yaye yonke loo nto ukusebenza, ukuba loo nto.
Uhlobo lokugqibela: I-2 iminyaka ye1 iveki edlulileyo Dariussssss.
I-2 iminyaka ye1 iveki edlulileyo #457 by StargateMax
Masiqalise okutsha, uvakalelwa kungcono kakhulu ngaloo ndlela. Uxolo ngayo ngasentla.
I sifakelwe enkulu Hawaii photoreal vol 1-2-3 pack, eKauai, yikuku Everest, eFiji, iziqithi kwiiBalearic v2.
Le installers bathi baya ngokuzenzekelayo kufakelwe yaye ndandicinga ukuba uza kufika kule Library nokubonakalayo.
Ndabona into entsha nokubonakalayo Library (zombini imidlalo).
Emva koko wabajonga Addon nokubonakalayo eneenkcukacha (zombini imidlalo), yaye akukho nto bendithe ifakiwe. Kwakhona ndandicinga ukuba bashicilelwe ifakiwe ngokwahlukileyo, kodwa akakwazanga ukufumana nabo ukuze ukubongeza ngesandla.
Xa ebhala le mpendulo apha ke ngequbuliso ndafumana ibhalbhu mzuzu ukukhanya. Ndakhangela kungena nokubonakalayo (hayi "Addon") ulawulo kunye scrolled kude phantsi, wabafumana khona! Kunye nokongeza ukuya Library nokubonakalayo ukusuka apho owenza umsebenzi.
Ndicinga ukuba baqhawula isonjululwe. Enkosi ngokuba siwanyamezele isimo sam, mna ngenene yacaphukisa emva kweentsuku 2 of ukuzixakekisa nayo.
Ndiyathemba le post kunceda nabani na omnye umntu nazo ingxaki efanayo mna.
I-2 iminyaka ye-6 imihla edlulileyo #464 by Dariussssss
Ndaba yinto efanayo happening.Don't ukwazi kutheni, kodwa installers benza ezinye izinto kakubi engalunganga. uhlaziyo Enye efanelekileyo kanye efunekayo.
Nice ukubona ukuba loo nto ukusebenza. Ngoko ke umelwe yona kwixesha elizayo xa kukho into ayisebenzi., Sixelele kangangoko kunokwenzeka, oko kuya kusinceda sonke ukuba ukusombulula le ngxaki.
Ixesha ukwenza page: 0.359 imizuzwana